भारत–चीनमा कुन देश धेरै शक्तिशाली ?
एजेन्सी । भारत–चीनबिचमा सीमामा कुनै तनाव सिर्जना हुनासाथ सबैभन्दा पहिले धेरैको मनमा उब्जिने पहिलो प्रश्न हो यी दुई देशहरुमध्ये सैन्य शक्तिमा कुन देश धेरै शक्तिशाली छ ?
यसको सही जवाफ स्पष्ट रुपमा चीन नै हो । चीनको अगाडी सैन्य क्षमतामा भारत धेरै नै पुड्को देखिनछ । रक्षा बजेटकै हिसाब गर्दा पनि भारतभन्दा चीनको रक्षा बजेट झण्डै तेब्बर रहेको छ । चीनको वार्षिक रक्षा बजेट १५२ अर्ब डलर छ भने भारतको जम्मा ५१ अर्ब डलर छ ।
तर, यसको मतलब यो होइन कि चीनले भारतलाई सजिलै हराउन सक्छ । दुवै देशका सरकारहरु पनि यो विश्वास गरेका छन् । अबको भारत चीन द्वन्द्व ठूलो परिणामको फोर्स सहितको भन्दा पनि सिमित र छोटो अवधीको हुनेछ । यसको कारण के हो भने दुवै देशलाई आणविक आक्रमणको डर हुनेछ किनभने दुवै देशसँग प्रशस्त आणविक क्षमता रहेको छ ।
भारत र चीनको सैन्य क्षमताको विस्तृत तुलना यस्तो छ
भारतको करिव १२ लाख सेना छन् । उसको ४,४२६ कम्ब्याट ट्याङ्क, ६७०४ आमर्ड फाइटिङ भेहिकल, २९० स्वचालित तोपखाना, ७,४१४ टावर्ड तोपखाना र २९० रकेट प्रोजेक्टर रहेका छन् ।
त्यस्तै चीनको २३ लाख सैनिक रहेका छन् । त्यस्तै उनको ६४५७ कम्ब्याट ट्याङ्क, ४७८८ आर्मर्ड फाइटिङ भेहिकल, १७१० स्वचालित तोपखाना, ६४२६ टावर्ड तोपखाना र १७७० रकेट प्रोजेक्टर रहेका छन् ।
चीनसँग २७० वटा आणविक हतियारको भण्डारण रहेको छ । चिनियाँ इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलले १५ हजार किलोमिटर सम्म मार हान्न सक्छ ।
उसको मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीले उ तर्फ आइरहेको मिसाइलहरुलाई चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा आउन पहिले नै त्यसलाई निष्कृय बनाइदिन्छ । उ सँग ९० वटा इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल रहेका छन् जसमध्ये ६६ वटा जमिनबाट मार हान्ने र २४ वटा पानिजहाजबाट मार हान्ने खालका छन् ।
भारतको आणविक भण्डारणमा १३० आणविक हतियार रहेका छन् । उसको शक्तिशाली हतियारले पाँच देखि ६ हजार किलोमिटर सम्म मार हान्न सक्छन् । उसले १६ हजार किलोमिटर सम्म मार हान्न सक्ने अन्तरमहादेशिय ब्यालिस्टिक मिसाइल बनाँउदै छ ।
चीनको जलसेनासँग ७१४ जहाजहरु जसमध्ये एक विमानवाहक पनि छ । ५१ वटा लडाकु जहाज, ३५ वटा सर्वनाशक जहाज, ३५ वटा क्रोभेटेस, ६८ वटा पनडुब्बी, २२० वटा गस्ती गर्ने जहाज र ५१ वटा सानो लडाकु जहाज रहेका छन् ।
भारतको जससेनासँग २९५ वटा जहाज, जसमध्ये तीनवटा एयरक्राफ्ट क्यारियर रहेका छन् । एउटा अहिले चालु छ अर्को बन्दै गरेको छ र तेस्रो बनाउने तयारी रहेको छ ।
१४ वटा लडाकु जहाज, ११ सर्वनाशक जहाज, २३ वटा कोर्भेटेस, १५ वटा पनडुब्बी, १३९ वटा गस्ती गर्ने जहाज र ६ वटा सानो लडाकु जहाज रहेका छन् । स्पष्ट रुपमै चीनको जलसेनाको शक्ति भारतको भन्दा धेरै नै शक्तिशाली रहेको छ तर भारतले पनि जहाजहरु बढाँउदै आफ्नो क्षमता बढाइरहेको छ ।
चीनको वायुसेनासँग जम्म २९५५ विमान रहेका छन् । जसमध्ये १२७१ लडाकु विमान, १२७१ वटा आक्रमण विमान, ७८२ ट्रान्सपोर्टस्, ३२ वटा ट्रेनर विमान रहेका छन् । त्यसै गरि चीनसँग ९१२ वटा हेलिकप्टर रहेका छन् जसमध्ये २०६ वटा आक्रमण गर्ने क्षमताका छन् ।
भारतको वायुुसेनासँग जम्मा २१०२ विमानहरु रहेका छन् । जसमध्ये ६७६ लडाकु विमान, ८०९ आक्रमण विमान, ८५७ ट्रान्सपोर्टर र ३२३ ट्रेनर विमान रहेका छन् । त्यसैगरि ६६६ वटा हेलिकप्टर रहेका छन् जसमा १६ वटा आक्रमण हेलिकप्टर रहेका छन् ।